“ပရိသတ်သာအခရာ” - Myanmar Network
Posted by Betty on November 5, 2014 at 11:59 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းသည် “နေရာအခင်းအကျင်း! နေရာအခင်းအကျင်း! နေရာအခင်းအကျင်း!” ဟူသည့်ဆိုရိုးစကားဟောင်းကိုမဏ္ဍိုင်ထားလည်ပတ်ကြသကဲ့သို့ ကျောင်းသား၊ ဆရာ၊ စာရေးဆရာ မည်သည့် ကျွမ်းကျင်လိမ္မာသည့် စာရေးသားသူမဆို အလားတူဆောင်ပုဒ်တစ်ခုအား လက်ကိုင်ထားရသည်။ အတော်ရိုးရှင်းပါသည် - “ပရိသတ်သာအခရာ” ဖြစ်ပါသည်။
အောင်မြင်သည့် အရေးအသားတစ်ခုဖြစ်ဖို့လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးအား ပရိသတ်ကသာ ပြဋ္ဌာန်းပေးသည်။ သာဓကအားဆောင်ရသော် မိမိ၏ကျောင်းဆရာ၊ သို့မဟုတ် အလုပ်ရှင်ထံသို့ ဦးတည်ရေးသားသည့်အခါမျိုးတွင် သူငယ်ချင်း၊ မိသားစုဝင်၊ အတန်းဖော် တစ်ယောက်ယောက်ထံရေး သားသည့်စာမျိုးနှင့်ကွာခြားစွာ အတည်အခံ့စာမျိုးရေးသားမည်ဖြစ်သည်။ နမူနာအနေနှင့် အလုပ်တစ်ရက်ပျက်ပြီး အထက်လူကြီးထံ စာတိုတစ်စောင်ရေးသားမည်ဆိုပါက အောက်ပါပုံစံမျိုး ရေးကောင်းရေးပေလိမ့်မည်။
ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့် ထိုအကြောင်းအရာကိုပင် သူငယ်ချင်းဖြစ်စေ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် တစ်ဦးထံဖြစ်စေရေးသားရာတွင် သည်လိုမျိုးရေးကောင်းရေးပေလိမ့်မည်။
မိမိစာကို ဖတ်မည့် ပရိသတ်ကပင် မိမိအသုံးပြုမည့်စကားလုံးများကိုရွေးချယ်ပေးပါသည်။ အသုံးအနှုန်း၊ လေသံ အတိမ်အနက်စသည် တို့ကို အခံ့အညားရေးရသည့်စာများသည် ယေဘုယျအားဖြင့် လေ့ကျက်ထားသည့်လေသံ၊ မွန်ရည်သည့်လေသံဖြင့်ရေးရန်လိုအပ်သော်လည်း သာမာန်မိတ်ဆွေ အချင်းချင်းရေးသားသည့် စာများတွင်တော့ အရပ်သုံးစကားဆန်ဆန် လေသံဖြင့် ရေးပါမှ ပိုမို အဆင်ချောပါလိမ့်မည်။
သည့်အတွက်ကြောင့် စာရွက်ပေါ်စကားလုံးများရေးမချခင် မိမိရေးသားမည့်လေသံ၊ စကားလုံးအသုံးအနှုန်းသည် စာဖတ် ပရိတ်သတ်နှင့် ဆီလျော် ကိုက်ညီမှု ရှိမရှိ အလေးအနက်ထားသင့်ပေသည်။
Dailywritingtips.com မှ Andi ရဲ့ Audience is Everything ကို ကိုးကားဘာသာပြန်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
“မယုံနိုင်စရာ” – အင်္ဂလိပ်စကားလုံး သုံးနှုံးပုံ
Permalink Reply by thinkhaingsoe on November 6, 2014 at 9:56